आज फागुन ३ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!
दिन भर मानसिकरुपबाट स्वस्थ रहनुहुनेछ । पारिवारिक जीवन सुखी रहनेछ । विदेशी व्यपारबाट सम्बन्धित मान्छेलाई सफलता र लाभ मिल्नेछ । बौद्धिक चर्चा वा विवादलाई टालेर वसमाधानकारी व्यवहार अपनाउनु होला ।
वृष – इ,उ,ए ,ओ,वा,व,वु,वे,वो (Taurus)
दिनभर आनन्द मनमा छाउनेछ । कार्य व्यवस्थितरुपबाट अगाडी बढ्नेछ र योजना अनुसार कार्य पनि गर्नुहुनेछ । अपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ । माईतबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । मानसिकरुपबाट तपाई आनन्दित रहनुहुनेछ ।
तपाईको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ । नयाँ कार्य प्रारम्भ नगर्नुहोला । जीवनसाथी र सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ । स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ । खर्चको मात्रा बढ्नेछ । सम्भव छ भने वाद-विवाद टाल्नुहोला । अपमान अथवा मानभंगको स्थितिबाट सम्हाल्नुहोला ।
शारीरिक स्फूर्ति र मानसिक प्रसन्नता बनाएर राख्नुहोला । छातीमा पीडा अथवा अन्य विकारबाट कष्टको अनुभूति हुनेछ । घरमा सदस्यसँग उग्र चर्चा वा वाद-विवाद नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला । पैसाको निकै खर्च भएको अनुभव गर्नुहुनेछ । सामाजिकरुपबाट मानहानिको प्रसंग उपस्थित नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला ।
कार्य सफलता र प्रतिस्पर्धिमा विजय मिल्नाले मनमा प्रसन्नता छाईरहनेछ । मित्रो र प्रेमीसँग रमणीय स्थानमा घुम्न जानुहुनेछ । आर्थिकरुपबाट तपाईलाई लाभ हुनेछ । मानसिक रुपबाट उद्वेगरहित रहनुहुनेछ । भाग्यवृद्धि हुने संकेत रहेको छ ।
दिन शुभ रहनेछ । बोलीको मधुरताबाट अरुलाई सकारात्मक छाप छोड्नुहुनेछ । पारिवारिक वातावरण पनि राम्रो रहनेछ । वादविवादलाई टाल्नुहोला । आर्थिक कार्य पनि सुखपूर्वक सम्पन्न हुनेछ । नकारात्मक विचारबाट टाढा रहनुहोला ।
तपाईको प्रत्येक कार्यमा आत्मविश्वास छल्केको अनुभव हुनेछ । आर्थिक योजना पनि सरलतापूर्वक बनाउन सक्नुहुनेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपबाट प्रसन्नताको अनुभव हुनेछ । वस्त्राभूषण र आनन्दमा पैसा खर्च हुनेछ । वैचारिकरुपबाट दृढता रहनेछ ।
वृश्चिक – तो,ना,नि ,नु,ने,नो,य,यी,यु (Scorpio)
तपाईको दिन मोज-शोक र मनोरंजनमा खर्च हुनेछ । स्वास्थ्यको सम्बन्धमा केहि सोधपुछ रहनेछ । मनभित्र चिन्ताको भावना रहनेछ । दुर्घटनाबाट बच्नुहोला । हरेक विषयमा ध्यान दिनुहोला ।
आर्थिक लाभ र सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्नुको साथसाथै पारिवारिक जीवनमा सुख सन्तोषको भावना अनुभव गर्नुहुनेछ । आयमा वृद्धि र व्यपारमा लाभ मिल्नेछ । मनपर्ने पात्रसँग सुखद क्षण बित्नेछ । मित्रसँग रमणीय स्थानमा जानुहुनेछ ।
व्यवसायको क्षेत्रमा धन, मान तथा प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । व्यपारको हेतुले भागदौड होला । उच्च पदाधिकारी खुशी हुनाले उन्नति हुनेछ । सरकार, मित्र तथा आफन्तबाट लाभ हुनेछ । गृहस्थ जीवनमा आनन्दको अनुभव हुनेछ ।
शारीरिक रुपबाट अस्वस्थ रहनाले मानसिक स्वस्थता बनाई राख्नुहोला । पेसामा उच्च अधिकारीबाट सम्हालेर रहनुहोला । मोज-शोकमा खर्च हुनेछ । सन्तानको सम्बन्धमा चिन्ता रहनेछ । प्रतिस्पर्धिसँग नउत्रिनुहोला । विदेशबाट समाचार मिल्नेछ ।
मीन – दी,दु,थ,झ,ञ,दे,दो,च,ची (Pisces )
आकस्मिक धनलाभको योग रहेको छ । मानसिक तथा शारीरिक श्रमको कारण स्वास्थ्य खराब हुन् सक्छ । खर्च वृद्दि हुनेछ । जलाशयबाट टाढा रहनुहोला । अनैतिक कामवृत्तिमा ध्यान राख्नुहोला । ईश्वर भक्ति र आध्यात्मिक विचारमा कष्टको कमी गर्नेछ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन ०२, २०७६१५:२२
आज फागुन ४ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!